The OnePlus 7 Pro na-enweta akara A + site na DisplayMate | Gam akporosis
Onye OnePlus 7 Pro ga-enwe ihuenyo OLED gosipụtara A + dị ka DisplayMate
Taa nwere Ihuenyo OLED na ekwentị gị bụ inye ya ọnọdụ ahụ dị mma n'ihi ọtụtụ ihe, dịka OnePlus 7 Pro ga-enwe na ngalaba OLED A +.
Ozi nkekọrịta DisplayMate, websaịtị bụ maka de test smartphone ihuenyo iji kwuo banyere àgwà o nwere; na n'agbanyeghị, ọ bụ Galaxy S10 + onye nke nwere "smartphone na ihuenyo kachasị mma n'ụwa" ugbu a.
Ihe na-atọ ọchị banyere ikpe a bụ na DisplayMate bụ nke gosipụtarala kedu ihe ihuenyo mere na gịnị ga-abụ Onye na-esote OnePlus 7 Pro na ọ gaghị ekwupụta ọkwa ya ruo mgbe ọnwa May 14.
N'aka nke ọzọ, a gaghị ekekọrịta akụkọ zuru ezu nke OnePlus 7 Pro site na DisplayMate ruo otu ụbọchị ahụ, Mee 14, n'agbanyeghị na ọ nweela akara mgbe ị natara akara A n'akụkụ nke ọkachamara a na ebe nrụọrụ weebụ n'okwu ndị a.
Ngosiputa ihe omimi nke DisplayMate nke Ngosipụta OnePlus 7 Pro OLED ka emechara, na-enweta akara ngosi A + A Kachasị Elu. Ihe omimi anyi gha egosiputa ebe a na onwa Mee 14.
- Ngosipụta DisplayMate (@DisplayMate) April 29, 2019
A OnePlus nke ga-ebido oge a ekwentị nke abụọ dịka Samsung mere cNa atọ ya nke Galaxy S10 na Huawei na oke njedebe ya, o yiri ka ị ga-enwe ọtụtụ ụdị iji kpuchie mkpa dị elu nke ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ.
Y nwee ezigbo ihuenyo Ọ bụ otu n'ime isi ihe dị mkpa iji nwee ike ịlụ ọgụ megide ekwentị ndị ọzọ dịka akara Korea. Nata akara A + pụtara na ị ga-enye onye ọrụ nnukwu mma ihuenyo maka ụdị ọdịnaya dị iche iche dị iche iche, egwuregwu na ngwa ndị ahụ nke anyị ji esere ma ọ bụ weghachite onyonyo, na echefughị ​​ọrụ nkwanye multimedia.
OnePlus 7 Pro chọrọ iju onye ọ bụla anya na ihuenyo ahụ ha adịlarị ka ha nwere akuko. Ugbu a, anyị kwesịrị ịmara ndị ọzọ. Maka nke a anyị na-ezukọ na ụbọchị na ozi ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Onye OnePlus 7 Pro ga-enwe ihuenyo OLED gosipụtara A + dị ka DisplayMate
Igwefoto Huawei P30 Pro ga-aka mma karịa mgbe ọ bụla melite ọhụụ
Astronomy hụrụ? Iji Samsung Galaxy S8 ị nwere ike ịse foto Saturn!